Chipatara cheChitungwiza chakabatsirwa | Kwayedza
Chipatara cheChitungwiza chakabatsirwa
11 Jan, 2022 - 15:01 2022-01-11T15:43:40+00:00 2022-01-11T15:38:51+00:00 0 Views
Madzibaba Simbarashe Nengomasha vachipa rubatsiro rwechikafu kumurwere pachipatara cheChitungwiza Central Hospital
SENZIRA yekutenda basa guru riri kuitwa nevashandi vose vepaChitungwiza Central Hospital mukubatsira varwere munguva ino yekurwisana nedenda reCovid-19, chechi yeJohane Masowe weChishanu iri munzvimbo iyi yakabatsira chipatara ichi nechikafu chevashandi uye nechevarwere pamwe nemidziyo yekudzivirira chirwere ichi.
Mai Audrey Tasaranarwo vanova mushandi anoona nezvekudyidzana neruzhinji pachipatara ichi vanoti Madzibaba Simbarashe Nengomasha – avo vanonyanya kuzivikanwa nekunzi Madzibaba Simba – vechechi yeJohane Masowe weChishanu yekuChitungwiza, vakatenda vashandi vepachipatara chavo nekushinga mubasa ravo panguva ino yekurwisana nekupararira kwedenda iri.
“Chipatara chedu chakabatsirwa nechikafu chakasiyana-siyana naMadzibaba Simba, vakauya nedingindira ravakabvumirana kuchechi kwavo rekuti ‘NaMwari Mupenyu neZvipatara Zvedu Tinokunda Denda reCovid-19’. Vakabatsira nekupa chikafu kuvashandi vose vepachipatara chedu nevarwere vose vaivapo musi uyu uyewo ndokukokorodza vanhu vatinobatsira pano vanorarama nehusope,” vanodaro Mai Tasaranarwo.
Varwere vakapihwa chikafu vanodarika mazana mana uyewo vashandi pachipatara ichi vakabatsirwa vanosvika zana.
“Nekuda kwebasa guru riri kuitwa nechipatara chedu mukurwisa denda reCovid-19, Madzibaba Simba – kunyangwe vachimbogara vachitibatsira kubva kare – vakati rwendo rwuno vanoda kuzviita vachitarisa kukanganiswa kwaitwa nyika nemhuri dzakasiyana nedenda reCovid-19.
Vakabatsira nezvinhu zvinosanganisira shuga, mupunga, mafuta ekubikisa, tani imwe chete yechibage, dovi uyewo nemidziyo yekuzvidzivirira pakurapa yemaPPEs inosanganisira mamasiki, sanitisers, sipo nezvimwe,” vanodaro Mai Tasaranarwo.
Vanoenderera mberi vachiti, “Vamwe vakabatsirwa vana vatinochengeta pachipatara chedu vanoraswa mumigwagwa. Takabatsirwa zvakare nenyama yemombe inorema makgs 140 uyewo kwakaunzwa magumbeze nembatya dzevana.”
Vanoti rubatsiro urwu rwauya panguva yakakodzera gore richingotanga.
“Varwere vakapihwa mafood hampers ayo mukati mawo aive nezvinhu zvinosanganisira sipo yekugezesa neyekuwachisa, shuga, mupunga, mafuta ekubikisa, sauti, dovi, bhinzi nezvimwewo,” vanodaro Mai Tasaranarwo.
“Tinotenda zvikuru chido chinogara chichiitwa naMadzibaba Simba nechechi yavo yeJohane Masowe weChishanu uye tichikurudzirawo mamwe masangano kuitawo zvimwe chete, zvikuru sei nekuoma kunoita zvinhu pachipatara munguva ino yeCovid-19.”
Madzibaba Simba vanoti zvakakosha kuti machechi ape mucherechedzo wakanaka munharaunda kuburikidza nekubatsira mune zvakasiyana-siyana.
“Ichokwadi, sechechi tinogara tichibatsira chipatara cheChitungwiza mukupera kwegore nekumavambo kwaro. Takapa chikafu kuvashandi vose vepachipatara ichi nevarwere vose,” vanodaro Madzibaba Simba.
Vamwe vevaenzi vanoremekedzwa vaive pagungano rekutambidzwa kwerubatsiro urwu vanosanganisira Mambo Seke, VaStanley Chimanikire vekwaSeke naMambo Musarurwa, VaEnock Musakwa, vekuChivhu.